I-euro ngayinye etshalwe imali ekuguqukeni kwesimo sezulu izonga ama-euro ayisithupha ngokuzayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kuzo zonke izici zemvelo, ukuvimbela kuyithuluzi elihle kakhulu. Njengoba behlala besho, "ukuvimbela kungcono kunokwelapha". Isibonelo, odabeni lokusha kwamahlathi, kungcono kakhulu ukutshala imali ekuphatheni kahle izindawo zemvelo, kunokuzama ukulungisa umonakalo odalwe umlilo wehlathi.
Endabeni yokuguquka kwesimo sezulu, akumangazi ukuthi isinqumo esingcono kakhulu esingathathwa ukuvimbela ukwelashwa. Yonke i-euro etshalwe ku-European Union ukunqanda ukuguquguquka kwesimo sezulu yonga ama-euro ayisithupha ngokuzayo. Kumayelana nani lokhu?
1 Faka imali ekuvikeleni ukuguquguquka kwesimo sezulu
2 Izivumelwano phakathi kweziMeya
3 I-European Union ehamba phambili emhlabeni ngokumelene nokuguquka kwesimo sezulu
Faka imali ekuvikeleni ukuguquguquka kwesimo sezulu
Ngenxa yokuthi imiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu manje seyincane kakhulu kunalokho ezoba ngayo esikhathini esizayo ngokwezibikezelo eziningi zesayensi, kushibhile ukutshala imali manje ekunqandeni imiphumela yako noma ekunciphiseni imiphumela yako kunokuba ulinde ukuzama ukuxazulula izinkinga ku Ikusasa eliseduze. Kuyacaca ukuthi kungcono ukufaka izicishamlilo egumbini ukuvikela noma yimuphi umlilo kunokuzama ukucisha umlilo uma ususabalele kulo lonke ibhilidi.
Esikhathini sika-2014-2020, i-EU izokwabela amaphesenti angama-20 wesabelomali sayo, cishe ama-euro ayizigidi eziyi-180.000, izinyathelo ezihlobene nokulwa nokuguquka kwesimo sezulu kanye nokwehliswa kokungcola okungcolisayo. Ukubuyekeza izinqubomgomo zomphakathi mayelana nesimo sezulu namandla ukunciphisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, sithola ukuthi enye yezinhloso ezibekelwe u-2030 ukunciphisa ukukhishwa kwe-CO40 ngama-2%. Lokhu kwehliswa kwe-CO2 kungavimbela ukufudumala okuqhubekayo koMhlaba kanye nokwenza ngcono ikhwalithi yomoya.
Ngaphezu kwalokho, ukufaka isandla ekunciphiseni ukukhishwa kwe-CO2, Siphinde futhi sibe nokukhuphuka okungama-27% kwamandla avuselelekayo kanye namanye ama-27% ekusebenzeni kahle kwamandla okuphakanyiswa yi-EU ngonyaka we-2030. Sikhuluma ngokuthuthuka kokusimama kwemvelo: ukunciphisa ukukhishwa kwamagesi angcolisayo nokutshala imali kumandla ahlanzekile. Konke lokhu kuzosho ukonga phakathi kwama-euro ayizigidi ezingama-7 no-13.000 ngonyaka.
Izivumelwano phakathi kweziMeya
Izivumelwano phakathi kwezimeya zamadolobha zidlala indima ebaluleke kakhulu maqondana nokwenza izenzo ezingeni lendawo nelesifunda. Isibonelo, ukufakwa kwezinqubo zezulu nezemvelo ezinkontilekeni zokuphatha komphakathi kufanele kukhuthazwe. Ngale ndlela "siphoqa" izinkampani ukuthi zithobele izinyathelo ezisiza ukunciphisa imithelela emvelweni kanye neqhaza ekusimeni okuhle kwemvelo, ngaphandle kokulahlekelwa yintuthuko yezomnotho.
Kwichibi, iKhomishini yaseYurophu ihlanganise isenzo sayo sezulu kuzo zonke izikhungo zayo. Ukwenza lokhu, kuhlose ukwaba ama-20% esabelomali esiphelele sesikhathi sika-2014-2020 ezenzweni eziphathelene nesimo sezulu, ezimele cishe ama-euro ayizigidi eziyi-180.000.
Ngakolunye uhlangothi, amanye ama-euro ayizigidi ezingama-315.000 avela eSikhwameni saseYurophu Sokutshalwa Kwezimali Kwamasu, izosetshenziselwa izenzo ezisekela imvelo nokunciphisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Namuhla, cishe wonke amaphrojekthi acela lezi zimali, ngoba zihlobene ngqo nesimo sezulu namandla.
I-European Union ehamba phambili emhlabeni ngokumelene nokuguquka kwesimo sezulu
Masikhumbule ukuthi, ngemuva kokuhoxa kweMelika eMvumelwaneni yaseParis, i-European Union neChina zihola phambili ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu. Kumele siqhubeke siphikelele ngezizathu zokusimama, ezomnotho, ukuzinza kwesimo sezulu kanye nokufuna ikusasa labo bonke. Yingakho yonke i-euro etshalwe imali manje ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu, ingonga ama-euro angama-6 ngokungadingi ukunciphisa imiphumela yemililo, izikhukhula, nezinye izinhlekelele ezibangelwe yiyo.
Lokhu kusebenza njengesibonakaliso kithi sonke uma kuziwa ekucabangeni ngomhlaba lapho ukusimama kwemvelo, ukuthuthukiswa komnotho kanye nokwenziwa kokongiwa komhlaba okuhlala kuwo wonke umuntu kanye nezizukulwane zethu zesikhathi esizayo kuzobusa khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Yonke i-euro etshalwe imali ekuguqukeni kwesimo sezulu izonga ama-euro ayisithupha ngokuzayo